Luka 7:36-50 NA-TWI | Biblica
Luka 7:36-50 NA-TWI
Farisini bi frɛɛ Yesu adidi ma ɔpenee so kɔe. Ɔte hɔ redidi no, ɔbea bi a obu bra bɔne wɔ kurow no mu tee ne nka no, ɔde aduhuam bi a ɛsom bo tumpan ma kɔɔ hɔ. Ɔkotow Yesu nan ase sui maa ne nisu no fɔw Yesu nan ase. Afei ɔde ne tinhwi popaa nisu no, soo ne nan de aduhuam no sraa ho.
Farisini a ɔfrɛɛ Yesu adidi no huu nea ɔbea no yɛe no, ɔkae wɔ ne tirim se, “Sɛ saa onipa yi yɛ odiyifo ampa ara a, anka obehu sɛ saa ɔbea yi bu ɔbra bɔne.”
Yesu huu Farisini no adwene ma ɔka kyerɛɛ no se, “Simon, mewɔ asɛm bi ka kyerɛ wo.” Simon nso ka kyerɛɛ Yesu se, “Kyerɛkyerɛfo, ka ɛ.”
Yesu ka kyerɛɛ no se, “Osikani bi bɔɔ nnipa baanu bi bosea. Ɔmaa ɔbaako sidi mpemnum; ɛnna ɔbaako no nso ɔmaa no sidi ahanum. Wɔn mu biara antumi antua ne ka a ɔde no no nti ɔde kyɛɛ wɔn. Wɔn mu hena na wugye di sɛ ɔbɛpɛ osikani no asɛm yiye?”
Simon buae se, “Migye di sɛ nea ɔde ne ka kɛse kyɛɛ no no.” Yesu kae se, “Woabua no yiye.”
Afei Yesu danee n’ani kyerɛɛ ɔbea no bisaa Simon se, “Woahu saa ɔbea yi? Mebaa wo fi, woamma me nsu anhohoro me nan ase; nanso saa ɔbea yi de ne nisu ahohoro me nan ase, asan de ne tinhwi apopa. Mebae yi, woanyɛ me atuu amfa amma me akwaaba; nanso efi bere a ɔbea yi bɛtoo me wɔ ha yi, onnyaee me nan mu so. Woamfa ngo amfɔw me tirim; nanso ɔbea yi de aduhuam a ɛsom bo asra me nan ase. Eyi nti mereka akyerɛ wo se, nea ɔbea yi ayɛ nti, wɔde ne bɔne a ɛdɔɔso no akyɛ no, efisɛ, wayi ɔdɔ kɛse bi adi akyerɛ. Na nea wɔde ne bɔne a esua akyɛ no no, ne dɔ nso sua.”
Afei Yesu ka kyerɛɛ ɔbea no se, “Wɔde wo bɔne akyɛ wo.”
Wɔn a ɔne wɔn te adidii no bisabisaa wɔn ho wɔn ho se, “Hena ne saa onipa yi a otumi de bɔne kyɛ?”
Yesu ka kyerɛɛ ɔbea no se, “Wo gyidi agye wo nkwa. Fa asomdwoe kɔ.”